'IJurassic World: I-Dominion' Teaser Ithatha Indawo eyi-65 Million Edlule
Ikhaya Izindaba Zokuzijabulisa Ezesabekayo 'IJurassic World: I-Dominion' Teaser Ithatha Indawo eyi-65 Million Edlule
by UTrey Hilburn III June 21, 2021
IJurassic Park Dominion's i-trailer entsha isithandile kakhulu. Kuthatha ukuphenduka okumangazayo ngokusibuyisela emuva eminyakeni eyizigidi ezingama-65. I-trailer ehluke ngokuphelele kunalokho ebesikulindele futhi sikulungele kakhulu lokho.
Kubonakala sengathi abantu abaya ukubona Bayashesha Futhi Bathukuthele ' ukuphuma kwesishiyagalolunye ku-IMAX, kuzobheka i-trailer enwetshiwe ye IJurassic Park's umnikelo wakamuva.
Imininingwane enikezwe okehlisa ngayo Umhlaba weJurassic: Dominion kuhamba kanjena:
Ukubuka kuqala okunwetshiwe kunikeza umuzwa wombukwane omangalisayo wefilimu ohloselwe izikrini ezinkulu nezicwilisayo. Kusethwe ngokwengxenye eminyakeni eyizigidi ezingama-65 edlule, ngesikhathi seCretaceous, ukubuka kuqala okugcwele izinto kufaka ama-dinosaurs angakaze abonwe kwifilimu ye-Jurassic- futhi aveze izigcawu ezithinta ingqondo nezimanga zokugijima komjaho.
Ukubuka kuqala Okukhethekile Kwemizuzu emihlanu kweJurassic World: Dominion, izethameli ezizokwazi ukuzizwela kusikrini esigcwele 1: 90: 1 IMAX® factor ratio, ifaka isandulela sokulandisa kwefilimu futhi isethwe eminyakeni eyizigidi ezingama-65 edlule, ngesikhathi isikhathi seCretaceous, lapho ama-dinosaurs azulazula kuwo wonke umhlaba. Izigcawu ezimangazayo, ezigcwele isenzo, eziqukethe amaphuzu ayizithonjana ompetha ka-Oscar® uMichael Giacchino, ziveza ukuthi uMhlaba wawubukeka kanjani kudala ngaphambi kokuba abantu babe khona futhi zisho indaba yokuqala yokuthi iDinosaur DNA yaqala kanjani ukuthwalwa umiyane oyinganekwane. Ukubuka kuqala kunezinhlobo ezintsha eziyisikhombisa zama-dinosaurs, ezidalwe yi-Industrial Light & Magic edumile, ezingakaze zibonwe kunoma iyiphi ifilimu ye-Jurassic ngaphambili. Kepha ukubuka kuqala akugcini lapho futhi kuphethe uphawu lokuhweba lwangempela lwezimanga zeJurassic ngama-dinosaurs ngokuhamba kwesikhathi azulazula eMhlabeni okunqunyelwe ukuthi kunciphe okwabo bodwa.
Futhi, lokhu sekuvele ukubukeka okuhle. Abekho abantu, awekho ama-dinosaurs aqeqeshiwe alandela amabhayisikili wokungcola noma enye enye i-dinos nje. Indlela okufanele kube ngayo. Okungenani ngilangazelele le trailer. Angiqiniseki ngakho Dominion okwamanje. Kusathenjwa kakhulu ukubuyisa emuva kwesahluko sokugcina esibi se- I-Jurassic World.
Ngabe nina bantu nicabangani ngeminyaka eyi-65 yezigidi ebuyela emuva ye IJurassic Park Dominion? Sazise esigabeni sokuphawula.
IJurassic Park: Ukubusa Kulindeleke ukuthi ingene kumatiyetha ngoJuni 10, 2022. Kepha i-trailer enwetshiwe ye-IMAX isezinkundleni zaseshashalazini ngoLwesihlanu, ngoJuni 25.
I-RL Stine's Fear Street inikezwe isilinganiso esingu-R. Kuhlole lapha.
Izindaba ze-American Horror 'zisibuyisela emuva endlini yendlu yokubulala